James Rodriguez Oo Ku Rajo Wayn In Saaxiibkii Falcao Real Madrid Kula Soo Biiridoono
Xidiga cusub ee kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Colombia ayaa ku rajo wayn in xidiga ay isku wadanka iyo kooxda ahaayeen ee Radamel Falcao inuu kula soo biiri doono kooxda Madrid xagaagan.
23 jirkan oo aduunka ka yaabsaday koobkii aduunka ayaa dhawaan ku soo biiray Real Madrid, isagoo ku guulaystay kabta tahabka ah ee gooldhalinta koobka aduunka. Waxa kale oo ay FIFA goolkii uu Uruguay ka dhaliyayna u aqoon satay inuu ahaa goolkii tartanka.
Falcao iyo James ayaa ka soo wada ciyaaray kooxaha Porto iyo Monaco , wuxuuna James doonaya inay mar saddexaad isku koox u ciyaaraan.James oo arintaa ka hadlaya ayaa yidhi: “Anigu waan hubaa in uu Falcao halkan ka ciyaari karo, laakiin anigu ma ihi qofka go’aaminaya haddii uu imanaayo iyo haddi kale waa arin u taala madax wayne Florentino Perez”.
“Laakiin waxa laga yaabaa inuu halkan yimaado waayo wuxuu leeyahay tayadii iyo maskaxdii uu ku guulaysan lahaa. Anigu waxaan isaga la soo ciyaarayay afar sano, kaliya waxaanu kala maqnayn intii uu joogay Atletico Madrid, wuxuu leeyahay maskax guulaysi taasina waa ta uu Real Madrid ka heli karo. Waxaan rajaynayaa inuu halkan yimaado.
James ayaa Real Madrid ugu soo biiray €80 million balse waxaanu haysan damaanad ah inuu lineupka Ancelotti markasta qayb ka ahaan doono isagoo arintaa ka hadlayay ayuu James yidhi: “Ugu horayn waa inaan si fiican tababarka u qaataa si aan uga mid noqdo lineupka kooxda. Ciyaartoyda kale oo dhami waxay sii joogeen kooxda 3-4 sano. Waa inaan ixtiraamaa iyaga, waana inaan qun yar qun yar soo galaa lineupka kadib waa inaan helaa fursad aan ku tuso heerkayga ugu sareeya. Waan farax sanahay waayo waxaa ii rumawday riyadaydii.waxaan rajaynayaa in wax kastaaba sida saxda ah u socdaan , wanaag ayaanan ka rajaynayaa waxaanan doonayaa inaan koobab kula guulaysto kooxdan wayn”.
Barcelona Oo Lagu Qasbi Doono Inayna Ku Tartamin Horyaalka La ligaha Haddii Gobalka Catalunya Xoriyad Qaadato
Iyadoo gobalka Catalunya ee ay Barcelona ku taalaa u dagaalamo xoriyad uu ka helo Spain inteeda kale , ayuu madax waynaha horyaalka Spain ku adkaystay in ayna Barcelona ka sii tirsanaan doonin horyaalka La ligaha haddii ay Catalunya xoriyad qaadato.
Gobalkan ayaa muddo dheer doonayay inay Spain inteeda kale ka go’aan iyadoo ay ugu wacan tahay farqi udhexeeya dhaqan ahaan iyo luuqad ahaanba. Barcelona ayaa ahayd astaanta gobalkan muddo dheer wuxuuna gudoomiyaha horyaalka ee Javier Tebas sheegay inayna Barcelona ka sii mid ahaan doonin horyaalka spain haddii ay goostaan Catalunya.
Javier Tebas oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Madoonayo inaan ka hadlo suurtagal nimada ee Catalunya waligeed waxay ahaanaysaa Spain.Anigu kaliya kama walwalsani Barcelona, laakiin waxaa kale oo jira Nastic, Girona, Espanol, Llagostera iyo Sabadell oo dhamaantood ka soo jeeda gobalkan. Haddii sharciga kubbada ee haddu sii jiro ma awoodi doonaan inay horyaalka ka sii mid ahaadaan.
“Waxaa nagu waajib noqonaysa inaanu sharciga wax ka badalno. Tusaale ahaan Andorra waxay ka ciyaartaa tartankayaga sababatoo ah sharci khaas ah ayaa sheegaya wayna awoodaan taas waa in wax dheeraad ah la sameeyaa”.
“Ugu horayn Barcelona ma awoodi doonto inay La Ligaha ka tartanto ilaa shesiis meel dhexe layskugu yimid la gaadhayo”.
Natiijoojin: Badhaadhihii liverpool, Baashaalkii Chelsea, Baraajihii Juventus Iyo Rajadii Celtic Ee Champions Leaque Oo God Ku Dhacday
Kulankii ugu xiisaha badnaa xagaagan ayay goor danbe oo caawa ah iskaga horyimaadeen xooxaha Man city iyo liverpool. Ciyaartan oo aad u xamaasad badnayd ayaa u dhaxaysay labadii kooxood ee uu tartanka horyaalka ingiriisku xili ciyaareedkii hore ka dhaxeeyay. Man City ayaa doonaysay inay liverpool kaga aargudato guul daradii Anfield kaga soo gaadhay kulankii ugu danbaysay balse taasi way suurto gali wayday oo iyadii ayaa guul daro kale gadhka loo sii galiyay.
Hadii aan ku horayno shaxdii ay kooxahani ku soo galeen iyo waliba line upkii ay koox waliba la shirtimid ayaa kala ahaa sidan: Man City: Shaxda (Man City (4-4-2): Lineupka: Caballero; Clichy, Boyata, Nastasic, Kolarov; Navas, Fernando, Zuculini, Milner; Jovetic, Dzeko.
Liverpool: Shaxda (4-3-1-2): Lineupka: Jones; Kelly, Toure, Coates, Enrique; Gerrard, Henderson, Allen; Coutinho; Lambert, Sturridge.
Kulanka ayaa ku bilawday xamaasad badan balse wax gool ah lama kala dhalin qaybtii hore ee ciyaarta. Markii laysku soo noqday Jovetic daqiiqadii 53 hogaanka u dhiibay kooxdiisa man city, 6 daqiiqo kadib ayuu dhankiisa Henderson liverpool gool ka baraajaha ah u keenay. Ciyaarta oo sii kululaatay ayuu markale Jovetic kooxdiisa markale hogaanka u dhiibay daqiiqadii 67. Iyadoo Man city u muuqata inay guul gacanta ku dhigayso liverpoolna weerar aan kala go’ayn ku hayso goolka Man city ayuu Raheem Sterling shabaga Man city soo taabtay daqiiqadii 85 aad. Sidaana waxay ciyaartu ku noqtay 2:2.
Intaa kadib ayay liverpool isku dayday inay guul ka gaadho kulankan iyadoo weerar badan ku qaaday goolka Man city iyadoo markale Sterling gool laga diiday. Labada kooxood ayaa loo dhigay rekoora yaal ay ku kala baxaan. Waxaa ugu horayn kubbada qaatay Kolarov kaas oo birta dulmariyay, waxaana ku xigay Daniel Sturridge oo isna Kolarov la mid noqday.Yaya Toure ayaa markiisa qaatay iyadoo uu Mignolet ka badbaadiyay wali waa 0:0. Emre Can oo ka mid ah ciyaartoydii dhawaan ku soo biiray liverpool ayaa natiijada u badalay 1:0 kadib markii uu Hart kala diray. Markale ayuu Mignolet Navas ka badbaadiyay, waxaa kubbada soo qaatay Henderson oo liverpool fursad dheeraada siiyay kadib markii uu koonaha sare ee bidixda ka dhaliyay isagoo Hart kala diray mar labaad.
Ugu danayn da’yarka IHEANACHO ayaa man city u dhaliyay rekoorihii kowaad waxayna natiijadu notay 2:1 liverpool ku gacan sarayso. Lus ayaa xaqiijiyay in liverpool guul muhiim ah gaadho isagoo xaga hoose ee midigta ka dhigay Hart sidaana waxay liverpool ku xaqiiqsatay guusheedii labaad ee koobka ICC. Rekoorayaasha ayaa ku soo dhamaaday liverpool 3:1 man city.
Chelsea vs Vitesse
Kooxda Chelsea ayaa sii wadata guulihii ay ka gaadhaysay kulamada saaxiibtinimo ee xagaagan. Inkasta oo aysan wali Chelsea la ciyaarin koox awood leh ama wayn wali waxay ku naaloonaysaa guulo isdaba joog ah. Cesc Fabregas ayaa u dabaal dagay goolkiisii kowaad ee uu u dhaliyo kooxdiisa cusub ee Chelsea.
Lineupka Chelsea kulanka ku soo gashay: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Luis, Van Ginkel, Fabregas, Matic, Salah, Costa, Torres. Substitutes: Beeney, Zouma, Terry, Chalobah, Ake, Romeu, Baker, Boga, Solanke.
Lineupka ay Vitesse kulanka ku soo gashay: Room, Wallace, Kashia, Van der Heijden, Kruiswijk, Vejinovic, Leerdam, Propper, Labyad, Vako, Traore. Substitutes: Velthuizen, Djurdjevic, Oliinyk, Dauda, Marvelous, Pedersen, Bosz, Ibarra, Diks, Klein-Holte.
Mohamed Salah ayaa Chelsea ugu horayn hogaanka u dhiibay daqiiqadii 4 aad ee bilawga ciyaartaba. Goolka labaad ayaa ahaa mid uu dhaliyay Fabregas kaas oo uu dhaliyay daqiiqadii 24 aad ee qaybtii hore ee ciyaarta.2:0 ay Chelsea ku hogaaminayso ayaa lagu kala nastay, markii layskugu soo noqday qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Chelsea halkii ka sii waday weerarkii ay ku haysay kooxda Vitesse waxaana daqiiqadii 76 aad u suurto gashay inay dhaliso goolkeeda saddexaad waxaana u qalinka ugu duugay Matic. Iyadoo ciyaartu dhamaan rabta ayuu Durdevic daqiiqadii 89 goolka calanka u dhaliyay kooxdiisa Vitesse. Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3:1 Chelsea guushu ku raacday.
Kooxda Juventus oo ku guulaysatay horyaalka Talyaaninga saddexdii sano ee ugu danbaysay ayaa xalay dhaafi kari wayday kooxda Cesena. Kulankan ayaa ku soo dhamaaday barbar dhac 0:0 ah.
Tababarha cusub ee Juventus Allegri ayaa kulanka ku soo galay lineup xoog leh kaas oo ay ka mid ahaayeen Stadio Dino Manuzzi, Andrea Pirlo, Stephan Lichtsteiner, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini iyo Thiago Motta.Juventus ayay durba ka muuqataa inay tabayso tababarahoodii Conte oo isagu si lama filaan ah iskaga casilay shaqada tababaranimo ee Juventus.
Kooxda Celtic ayay masiibo u soo hoyatay kadib markii 4:1 ay ku dubatay kooxda Legia Warsaw oo gurigeeda marti loogu ahaa. Kulankan oo ahaa is reeb reebka ay kooxuhu ugu soo baxayaan hoyaalka kooxaha qaarada yurub ee Champions leaque. Celtic ayay arintu ku sii adkaatay kadib markii ciyaarta laga saaray laacibkooda Efe Ambrose qaybtii hore ee ciyaarta. Ciyaarta ayaa ku soo dhamatay 4:1 taas oo ay Celtic u muuqato inay sanadkan seegidoonto Champions leaquega.
Carlo Anceloti Oo Sheegay In Cristiano Ronaldo Safandoono Kulanka Dhex Maridoona Real Madrid Iyo Man United
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa shaaca ka qaaday in laacibkii hore ee Man united Cristiano Ronaldo uu ka hor imandoono kooxdiisii hore isagoo sheegay in Ronaldo tababarka si fiican uqaatay.
Ronaldo ayaa wali kooxdiisa u safan intii ay bilawdeen kulamada saaxiibtinimo ee xagaagu iyadoo kooxdiisa ay soo gaadhay laba guuldaro oo is huwan kuwaas oo ka soo gaadhay kooxa ree Talyaani ee Inter Milan iyo Roma.
Ronaldo ayaa laga yaabaa inuu kulankisii kowaad ee xagaagan ka horyimaado kooxda Man united oo ay Real Madrid kulmidoonaan.
Ancelotti ayaa yidhi: “Cristiano si fiican ayuu u shaqaynayaa, kaligii ayuu tababaranayaa, wuxuu qaatay laba tababar oo isku xiga maalintii shalay ahayd. Waxaanu eegidoonaa inuu ciyaari karo kulanka Man united. Waxaan filayaa in dhibaatadii ka haysatay jilibku ay dhamaatay. Taxadar ayaan ka muujinaynaa, xaaladiisuna way dagan tahay dhibaatadiina waa la ilaaway”.
Degdeg:Romelu Lukaku Oo Ka Soo Duulaya Belgium Si Uu U Dhamaystiro £25million Oo Ugu Wareegayo Everton
Weerar yahanka xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chelsea ayaa qarka u saaran inuu £25million ugu biiro kooxda Everton. Lukaku ayay ahayd inuu maanta ku biiro kooxda Jose Mourinho balse wuxuu Lukaku maanta ugu soo duulayaa England sidii uu u dhamaystiri lahaa heshiis shan sano ah oo uu ugu wareegayo kooxda Roberto Martinez.
Lukaku ayaa xili ciyaareedkii hore Goodison Park ku soo qaatay hal xili ciyaareed oo amaah ah halkaas oo uu ku soo qaatay waqti uusan waligii ka helin kooxdiisa Chelsea.Lukaku ayaa qalinka ku duugi doona heshiis shan sano ah kaas oo uu todobaad kii mushaar ahaan u qaadan doono £75,000.
Lukaku ayaa noqonaya ciyaartoygii ugu qaalisanayaa ee ay abid Everton iibsato. Lukaku ayaa bartiisa twitterka soo galiyay sawir uu diyaarad saaran yahay isagoo waliba suulka qor aadinaya waxaana intaa u raaca inuu farax san yahay oo uu dhoola cadaynayo. Waxa kale oo qoraalku soo raaciyay “ waa waqtigii uu waa cusubi cusubi baryi lahaa”. Hadalkaas oo uu u muuqda inuu dhamaaday waqtigii Lukaku ee Chelsea.
21 jirkan ayaa xili ciyaareedkii dhamaaday ka mid ahaa ciyaartoydii Everton u suurto galisay inay Arsenal kula dagaalanto kaalinta afraad. Lukaku ayaa Everton u dhaliyay 15 gool oo horyaalka ah, 31 kulan oo uu u ciyaaray.
Natiijoojinka Kulamadii Xalay Dhacay, Guuladaradii Real Madrid Oo Sii Socata Halka Man United Guulaheedii Sii Wado
Guuldarooyinkii kooxda Real Madrid ayaa halkeedii ka sii socta iyadoo markale kooxda ree Talyaani ee Roma afka ciida u dartay. Inter Milan ayaa hore Real Madrid uga soo badisay halka gool uu dhaliyay Francessco Totti daqiiqadii 58 aad ee qaybtii danbe ee ciyaartu uu Real Madrid guul daro labaad u horseeday.
Markii ciyaarta la soo galay ayay arintu cirka isku shareertay kadib markii Seydou Keita oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Barcelona uu diiday inuu gacan qaado difaaca Real Madrid ee Pepe kadibna uu caagad nooca biyaha ah ku tuuray Pepe.
Real Madrid ayaa qaybtii hore ee ciyaartay si fiican u ciyaartay balse waxaa u suurto gali wayday inay soo taabato shabaga Roma. Roma ayaa ku ciyaaraysay qaab ku dhisan weerar deg deg ah iyadoo marka uu Totti kubbada gacanta ku dhigana ay dhibaato ku abuurayeen difaaca Real Madrid. Ciyaarta ayaa ugu danbayn ku soo idlaatay 1:0 ay Roma guushu ku raacday, iyadoo goolka uu Totti dhaliyay daqiiqadii 58 uu ku filnaaday in Roma guul gaadho.
Van Gaal ayaa afar isbadal ku sameeyay kooxdii uu sabtidii 3:2 kaga badisay Roma balse waxaa booskoodii sii haystay Anders Lindegaard, Chris Smalling, Fletcher iyo Ashley Young.Dhinaca Roma ayaa Iyana hal ciyaartoy ka badashay shaxdii ay rekoora yaasha kaga soo badisay kooxda Real Madrid ciyaartoygaas oo ahaa Joel Obi.
Labada kooxood ee Man united iyo Roma ayaan wax gool ah iska dhalin intii ay ciyaartu socotay waxayna ku kala baxeen rekoora yaal. Man united ayay rekoorayaasha u laageen ciyaartoyda kala ah Ashley Young, Javier Hernandez, Cleverley, Shinji Kagawa iyo Fletcher iyagoo dhamaantood shabaga soo taabtay. Ugu danbayn kulanka ayaa ku soo dhamaaday 5:3 ay Man united ku guulaysatay, waana guusheedii saddexaad oo isku xigta oo ay badisay intii ay ciyaaraha saabtinimo bilaameen.
Man united ayaa sabtida soo soctoa Michigan Stadium kula dheelidoonta kooxda Real Madrid halka kooxda Roma ay is wajihi doonaan kooxda ay isku Serie A dayihiin ee Inter Milan.
waxaayaba uu kulankani la gaarka ahaa waxaa ka mid ah in kabtankii hore ee Man united Vidic uu markii u horaysay kooxdiisa ka hor yimid. Van Gaal ayaa Wilfried Zaha ka ciyaarsiiyay No.9 isagoo shalay sheegay inuusan ahayn ciyaartoy baal ah. Dhanka kale Van Gaal ayaa Luke Shaw badal ku soo galiyay kadib 24 saacadood markii uu amarka ku siiyay inuu laba jeer tababarto. Van Gaal ayaa sii waday tijaabada uu ku samaynayay shaxda 3-5-2 taas oo xalay u muuqatay in ayna markasta noqon karin mid laysku haleeyo.
Sida loo kala laagtay Rekoorayaasha:
Kashifaad: Luka Modric Oo Iska Diiday Inuu Chelsea Ku Biiro
Tababaraha Chelsea Jose Mourinho ayaa fashiliyay sir uu qarinayay taas oo ah in uu Luka Modrid iska diiday inuu kooxda Chelsea ku soo biiro. Modrid ayaa iska diiday fursad uu markale ugaga hoos ciyaari lahaa tababarihiisii hore ee Mourinho.
Xidiga xulka qaranka Croatia ee Luka Modric ayaa xili ciyaareedkii hore ayaa ciyaartoygii ugu fiicnaa kooxda Los Blancos isagoo kula guulaystay kooxdiisa Copa Del Rey iyo Champions Leaque.
Kadib markii uu Modric xili ciyaaredkii dhamaaday soo jiitay indhaha dadka xiiseeya kubbada cagta ayuu Mourinho qirtay inuu Modric safkiisa Chelsea ku soo daro balse nasiib daro uu laacibku iska diiday.
Mourinho oo arintaa ka hadlaya ayaa yidhi: “ Waxaan wacay Modric, waxaanan ula hadlay si khasi ah laakiin muudoonayn inuu Chelsea ku soo biiro. Waan ogahay inaan anigu aad ula dhacsanahay Luka Modric iyo tayadiisa laakiin wuxuu doortay inuu Real Madrid ku sii nagaado”.
Maanta Oo Salaasa Ah Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala IIbsiga Ciyaartoyda
Iyadoo uu suuqa kala iibsiga ciyaartoydu bar yahan danbe xaami yahay oo ay koox kastaaba raadsanayso ciyaartoyd ay u aragto inay safkeeda wax ku soo kordhinayso ayaa waxaa jira kooxo horeba suuqa uga adeegtay iyo kuwo wali raadinaaya ciyaartoydii ay rabeen. Kooxaha qaar ayaa umuuqda inay hamuum u qabaan suuqa halka qaarkood u baahan yihiin laba ama saddex ciyaartoy oo kaliya. Waa hubaal in horyaalka ingiriiska iyo ka Spainish noqon doonaan kuwo xiiso wayn leh xili ciyaareedka soo socda marka la eego ciyaartoyda ay kooxaha waa wayni soo gadanayaan.
Hadaba akhristayaasha Jornalizem.com waxaan sida caadada ah halkan idiinku soo gudbinaa wararka la xidhiidha suuqa iyo waxa ay saxaafadu ka qortay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Hadba wararka ka soo kordha suuqa kala iibsiga isla qormadan dhexdeeda kala soco
Aan Ku bilawno:
Man united ayaa isku diyaarinaysa inay Nani ugu deeqdo Arsenal si ay u hesho Thomas Vermaelen iyadoo sidoo kale Van Gaal doonayo in Dortmund xiixayso Shinji Kagawa si uu qayb uga noqdo iibka Mats Hummels
Il wareedka: Daily Express
Warar fiican oo dhiiro galin ah ayay kooxaha Man united, Barcelona, Bayern Munich iyo liverpool ka heleen Marco Reus markii la ogaaday in heshiiskiisa lagu burburin karof €35 million.
Arturo Vidal ayaa ficliyan ogolaaday heshiis uu ugu biirayo kooxda Man united xagaagan. Juventus ayaa Vidal ku doonaysa €60 million iyadoo la sheegay in Man united Vidal ugu deeqday mushaar sanadkii ah €13m. Man united ayaa xagaaga oo dhan daba socotay saxiixa Vidal balse wali heshiis rasmi Juventus islamay gaadhin
Il wareedka: El Mercurio
Kooxda Arsenal ayaa heshiis cusub u soo bandhigtay gool dhaliyahooda Olivier Giroud. Heshiiskan cusub ayuu Giroud ku kordhin doonaa kii hore uu kooxda kula joogay oo dhacaya sandka 2016ka.
Il wareedka: L’Equipe
Maamulka kooxda Atletico Madrid ayaa la sheegay in ay safar ku joogaan Paris si ay PSG ugu qanciyaan iibka weerar yahanka xulka qaranka Argentina ee Lavezzi.
Il wareedka: AS
Gool yaha xulka qaranka Costa Rica iyo kooxda Levante Keylor Navas ayaan wax war dheeraada ka helin inuu xagaagan ku biiri doono kooxda Real Madrid iyo Inkale. Navas ayaan mustaqbalkiisa waxba ka ogayn. Hore ayaa loo sheegay in Real Madrid si rasmi ah ula soo wareegayso Navas balse goolhayaha ayaan wali hubin halka uu xili ciyaareeda cusub ka ciyaaridoono.
Kooxda Atletico Madrid ayaa sheegtay in ay xidhiidh ka heleen kooxda Barcelona iyoo ay wararku sheegayaan in Barca doonayso difaaca kooxda Atletico ee Miranda. Barca ayaa suuqa ugu jirta sidii ay difaaceeda u xoojin lahayd.
Il wareedka: Sport
Kooxda inter milan ayaa doonaysa inay wada hadalo la furto kooxda Man united oo ku aadan Javier Hernandez. Inter ayaa doonaysa inay man united Hernandez kaga qaadato hal xili ciyaareed oo amaah iyadoo marka uu dhamaado iibsan karta.
il wareedka: Corriere dello Sport
Barcelona ayaa liverpool la leh wada hadalo horumar laga samaynayo iyadoo ka doonaysa difaacooda Daniel Agger. Agger ayaa laga yaabaa inuu Barca u saxiixo heshiis shan sano ah isagoo ku kicidoona lacag dhan €15 million.
Mourinho oo laga yaabo inuu kooxda Chelsea ka iibiyo flopka Torres ka dib markii kooxdiisu gaadhay heerkii ugu sareeyay ee ciyaartoyda ajnabiga ah waxa kale oo uu shaki ku jiraa in Chelsea iska iibiso Cech.
Il wareedka: Daily Telegraph
Kooxda Napoli ayaa isha la raacaysa inay la soo wareegto Christian Eriksen oo u ciyaara kooxda Tottenham. Balse Napoli ayaa haysata €11.5 million oo kaliya si ay ula soo wareegto ciyaartoy khad dhexe ah.
Il wareedka: The Times
Kooxda Fiorentina ayaa kooxaha doonaya saxiixa Cuadrado u sheegtay inay bixiyaan €50m haddii ay doonayaan inay la wareegaan laacibkooda. Kooxaha Man unted, Bayern munich iyo Barcelona ayaa ku dagaalamayay saxiixa Cuardrado balse way adag tahay inay ka bixiyaan qiimaha ay doonayso kooxdan ree Italy.
Il wareedka: Mundo Deportivo
Kooxda Man united ayaa diyaar u ah inay iska iibiso Kagawa iyo Fellaini. Kooxda united ayaa sheegtay inay dhagaysan doonto dalabyada uga yimaada Kagawa iyo Fellaini. Waxakale oo la sheegay inay man united isku diyaarinayso inay iska iibiso Anderson
Il wareedka: Manchester Evening News
Kooxda Newcstle ayaa tix galinaysa inay la wareegto weerar yahanka kooxda QPR ee hore amaahda ugula joogay ee Remy. Remy ayaa ku dhacay tijaabada caafimaadka ee kooxda liverpool.
Il Wareedka: Daily Mirror
Kooxda Celtic ayaa iska diiday inay iska iibiso gool haye Forster. Kooxda ayaa sheegtay inaysan iska iibin doonin Fraser Fowrster ilaa inta ay u soo baxayso Champions leaque.kooxda Southamton ayaa ku doonaysay €4.5 million iyadoo laga soo diiday dalab ay ka gudbisay.
Il wareedka: Daily Mail
Daniel Sturridge: Anigu Shaqsiyan Ma Buuxin Karo Booskii Uu Baneeyay Luis Suarez
Suarez oo ahaa ciyaaroygii ugu fiicnaa kooxda liverpool ayaa £75m ugu biiray kooxda Barcelona. Suarez ayaa liverpool 31 gool u dhaliyay xili ciyaareedkii dhamaaday wuxuuna ka caawiyay inay horyaalka kaalinta labaad ka galaan halka ay u soo baxeen horyaalka yurub oo ay dhawr sano ka maqnaayeen.
Sturridge ayaa dhankiisa liverpool u dhaliyay 21 gool balse wuxuu iska diiday inuu isaga yahay ninka buuxin doona booska uu baneeyay luis Suarez. Sturridge ayaa doonaya inay kooxda oo isku duubani buuxiso booskaas.
Sturridge ayaa yidhi: “Tani waa koox Wayn waxayna haysataa ciyaartoy badan oo buuxin kara booska uu baneeyay suarez, laakiin ma odhan karo inaan anigu si toos ah u buuxin karo.
“Koox ahaan waanu u buuxin karnaa mana odhan karo inaan ahay ninka ugu muhiimsan laakiin waxaanu koox ahaan iskugu dayidoonaa sida ugu fiican ee aanu hore ugu socon karno. Suarez waxaanu ahayn lamaane khaas ah, waxaanu soo wada qaadanay waqtiyo fiican”.
“waxaanu gool dhalintayada kusamaynay taariikh laakiin xili ciyaareedka cusub kor ayaan u sii qaadi doonaa gool dhalinta.waa hawl noo wada taala kooxda oo dhan, waa hawl u wada taala ciyaartoyda cusub iyo kuwii kooxda hore usii joogay.
Suarez iyo Strurridge oo la siiyay magaca SAS ayaa ahaa xili ciyaareedkii dhamaaday labadii weerar yahan ee koox uwada ciyaara ee ugu fiicnaa yurub iyagoo dhaliyay 52 gool oo horyaalka ah. Liverpool ayaa suuqa ugu jirta weerar yahan buuxiya booska Luis Suarez inkasta oo ay adag tahay in hadda la helo cidii buuxin lahayd.
Rasmi: Liverpool Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday Saxiixa Dejan Lovren Iyo Isagoo Dareenkiisa Ka Hadlay
Kooxda Liverpool ayaa si rasmi ah u soo gabagabaysay saxiixa difaacii hore ee kooxda Southamton Dejan Lovren kaas oo ay kula soo wareegtay lacagtii abid ugu qaalisanayd ee ay ku soo iibsato ciyaartoy difaac ah. Liverpool ayaa Lovren ka bixisay £20million oo bown.
Lovren ayaa taariikh ku yeeshay Alfield ka dib markii uu noqday difaacii ugu qaalisanaa ee liverpool. Mamadou Sakho ayaa hore u ahaa difaaca ugu qaalisan ee liverpool suuqa kala soo wareegtay iyadoo PSG siisay lacag dhan £18.6million
Lovren ayaa Rodgers u ahaa bartilmaameedka kowaad isagoo doonaya inuu xoojiyo difaaca kooxda. Lovren ayaa liverpool u saxiixay heshiis shan sano ah.Lovren ayaa hadda ku biiridoona kooxda liverpool ee dalxiiska u joogta USA. Liverpool ayaa Arbacada la ciyaaridoonta Man city ama Charlotte.
Lovren ayaa sidoo kale ku biiri doona ciyaartoydii hore ee ay isku kooxda ahaayeen ee Reckie Lambert iyo Adam Lallana. Lovren oo ka hadlayay saxiixa uu liverpool ugu soo wareegay ka hadlayay ayaa yidhi: “Tani waa riyo ii rumawday. Aad iyo aad ayaan ugu farax sanahay inaan halkan imaado. Aad iyo aad ayaan ugu han waynahay mana sugi karayo inta aan ku bilaamayo.Waan ogahay inaanu leenahay millions iyo millions taageerayaal ah liverpoolna way ka wayn tahay koox”.
“Kadib markii aan ku ciyaaray Anfield xili ciyaareedkii hore waxaan naftayda ku idhi “maalin uun baan rajaynayaa inaan awoodo inaan halkan liverpool ugu ciyaaro’, taageerayaashu way ogyihiin inaan ahay ciyaartoy ilaa daqiiqada ugu horaysa 100% kooxda u hora”.